China Manual PVB တပ်ဆင်ရေးလိုင်း ကားလေကာမှန် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ | Fuzuan
အမျိုးအစား- Lamination ထုတ်လုပ်မှုအတွက် စုစည်းမှု Conveyor။
လိုအပ်သောဖန်များ- Laminated လေကာမှန်၊ အတွင်းနှင့် အပြင်မှန်ကိုကွေးပါ။
မော်ဒယ် နံပါတ်- FZPAL-M
အများဆုံး Glass Size : 1850*1250 mm အနိမ့်ဆုံး Glass Size : 1200*400 mm
Glass Thickness: 1.6mm –6mm
Glass Transfer Speed: 3-16 m/min
ကွေး၏အတိမ်အနက်- Max. 240mm
အသုံးပြုမှု- Laminating လုပ်ငန်းစဉ်တွင် လေကာမှန်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် Float Glass နှင့် PVB တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ပိုက်လိုင်းများ။
ဤမော်တော်ကားလေကာမှန်တွင် အကာအရံဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော PVB တပ်ဆင်ရေးလိုင်းတွင် မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ကွဲပြားသော သယ်ယူကိရိယာများ ပါဝင်သည်။
ဖန်နှစ်ပိုင်းကို ညှပ်ပြီး အလယ်မှာ PVB ဖလင်ထည့်ပါ။ PVB ၏ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် ကြမ်းခင်းထားသော မှန်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားလေ၊ ၎င်းနှင့် ဖန်ကြားတွင် ကပ်ငြိမှု နည်းပါးလေ၊ အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု နည်းပါးလာပြီး ကပ်ငြိမှု နည်းပါးလေဖြစ်သည်။ ပိုအားကောင်းလေ ထိုးဖောက်မှုခုခံနိုင်မှု နည်းပါးလေဖြစ်သည်။
ဤစည်းဝေးပွဲလိုင်းအား အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆကို ကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်သည့် ရာသီဥတုထိန်းချုပ်သန့်စင်သည့်အခန်းတွင် တပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ Conveyor အလျားပိုရှည်လေ၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ ပရိဘောဂအား နောက်ဆက်တွဲအပူပေးမီးဖို/ လေထုတ်စက် နှင့် အော်တိုကလီဗေးရှင်းများနှင့်အညီ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် စဉ်ဆက်မပြတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် လုပ်သားအင်အား အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်သားကိုင်တွယ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။
Laminated လေကာမှန်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ မှန်ကိုကွေးညွှတ်ပြီးအခြောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ အတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်မျက်မှန်များသည် PVB ဖလင်နှင့်ပေါင်းစပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဤ conveyor လိုင်းမှတစ်ဆင့် PVB အလွှာကို ဖန်သားနှစ်ပိုင်းကြားတွင် စုစည်းကာ၊ ပိုလျှံနေသော PVB ကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ Glass Edges ပတ်လည်တွင် ရုပ်ရှင်၊ Silicon Rubber Rings ကို Glass Rim ပတ်လည်တွင် ပတ်ထားသည်။
Main Process အဆင့်ဆင့်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
● အတွင်းမှန်ချပ်များ နေရာချထားခြင်း။
● PVB ကြားလွှာ အခင်းအကျင်း။
● အပြင်ဘက်မှန်ချပ်များ နေရာချထားခြင်း။
● ဒြပ်ပေါင်းအကန့်၏ စည်းဝေးပွဲ။
● မှန်အစွန်းတစ်ဝိုက်တွင် ပိုလျှံနေသည့် ဗီနိုင်းကို ဖယ်ရှားပါ။
● ဆီလီကွန်/ရာဘာလက်စွပ် လုပ်ငန်းစဉ်
● PVB အလွှာပါသော အတွင်းနှင့် အပြင်ဘက်မှန်ချပ်များကို DE-airing စနစ်၊ ဖုန်စုပ်ကွင်းမီးဖို၊ နို့သီးအလိပ်များ သို့မဟုတ် ဖုန်စုပ်အိတ်များ စသည်တို့တွင် အတွဲလိုက် ကျွေးပါသည်။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို အထူးပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး PVB အခင်းများအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် အပူချိန်ထိန်းညှိပေးသည့် စနစ်သည် အလိုအလျောက် အုပ်ချုပ်နိုင်သော လေအေးပေးစက်စနစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
FZPAL-M အတွက် အမြန်နှုန်း- 3-13 m/min (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်)
ဤ PVB Assembly Conveyor သည် အဓိကအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
● သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး ခါးပတ်စနစ်
● ဖန်ပိုက်လိုင်း လေးခု။
● မှန်တောင်တက်စက် နှစ်စုံ။
● လိုင်းတစ်ခုလုံး၏ ထုတ်လွှင့်မှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် တစ်သမတ်တည်းဖြစ်ပြီး ကွေးထားသော မှန်အဝတ်လျှော်စက်နှင့် လေထုတ်သည့်လိုင်း/ဖုန်စုပ်စက်တို့လည်း ကိုက်ညီရပါမည်။
● ကွေးညွတ်သောအဝတ်လျှော်စက်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ မှန်ကို မှောက်လျက်အငိုက်မျက်နှာပြင်ဖြင့် သယ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကိရိယာနှင့် ဖန်ကြားတွင် ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေရန် ကိရိယာနှင့် ဖန်သားပြင်ကြားတွင် ထိတွေ့မှုမဖြစ်စေရန် ထောက်ကူတုံး၏ အလုပ်လုပ်သောမျက်နှာပြင်၏ အမြင့်သည် လုံလောက်စွာမြင့်မားနေရပါမည်။ .
● လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း မှန်သည် ကောင်းမွန်သောအနေအထားတွင်ရှိပြီး မပြောင်းကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် လိုင်းတစ်ခုလုံးကို ချောမွေ့စွာ ထုတ်လွှင့်ရပါမည်။
● ရိုက်ကူးရေးအခန်းကို ညစ်ညမ်းစေခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် လိုင်းတစ်ခုလုံးတွင် သံချေးတက်ခြင်း အတိုင်းအတာများ ရှိရပါမည်။
● ဖန်သားနှင့် ထိတွေ့သော လွှဲပြောင်းဘလောက်သည် ချောမွေ့ပြီး မှန်ကို မခြစ်မိစေရပါ။
● PVB ဖလင်နှင့် လေကာမှန် သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဥ်ပြုလုပ်ထားသော မှန်ပြတင်းပေါက်အတွက် ရော်ဘာ/EPDM လက်စွပ်၏လည်ပတ်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်၊ အလွှာကြားနှင့် လေဟာနယ်လက်စွပ်၏ လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုအတွက် lifting system လိုအပ်ပါသည်။
● ဖန်သားကို လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန် လည်ပတ်သူအရေအတွက်ကို လျှော့ချရန်အတွက် PVB တင်သည့်အနေအထားတွင် induction အလှည့်ကျစက်ကို ထည့်သွင်းထားသည်။
3 နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
Glass Thickness 1.6 မီလီမီတာ –6မီလီမီတာ
Conveyor အမြင့် 1100-950±25mm (စိတ်ကြိုက်)
Bend ၏အတိမ်အနက် အများဆုံး 240 မီလီမီတာ
Glass Transfer Speed3- 16 m/min (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသည်)
စုစုပေါင်းပါဝါ5KW
ဖိထားတယ်။ 1 cbm/hr၊ 0.6~0.65Mpm
● အမှတ်စဉ်လိုက်ပို့ကိရိယာများ၏ ခါးပတ်များကြားတွင် အကူးအပြောင်းတွင် မှန်ကို ညင်သာစွာ လွှဲပြောင်းသည်။
● Glass positioning စနစ်။
● ၎င်းသည် သံချေးတက်ခြင်းအခန်းကို ညစ်ညမ်းစေခြင်းမှရှောင်ရှားရန် သံချေးတက်ခြင်း ကုသမှုများကို လက်ခံပါသည်။
● လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် လွယ်ကူသော PVB ဘူတာရုံနှင့် ဖုန်စုပ်စက်ကွင်းဖြစ်စဉ်ဘူတာတွင် ရုတ်သိမ်းခြင်းစနစ်။
● ထိန်းချုပ်မှုအတွက် ဖန်သားပြင်၏ အနေအထားကို သိရှိနိုင်သည့် အာရုံခံကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။
● ကြိမ်နှုန်းအင်ဗာတာဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သော အမြန်နှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
ယခင်- ဖန်အကွေးအဝတ်လျှော်စက်အတွက် အအေးခံပြွန်
နောက်တစ်ခု: အလိုအလျောက် PVB စည်းဝေးပွဲလိုင်း လေကာမှန် အကာအရံစက်များ
စက်ရုပ်ဖန်သားတင်ခြင်းစနစ် Glass Separation for...
Vacuum Pre Lamination ကားလေကာမှန် Vacuum ri...
နောက်ကြည့်မှန် ဘေးမှန် မှန်အဝတ်လျှော်စက်